Aakar August 31, 2012
संसार अचम्मको छ, बाँच्नु पर्छ सबै देखिन्छ भन्थे हो रै’छ । सामसुङले ५ सेन्टका सिक्काहरुले भरिएको ट्रक एप्पल मुख्यालयमा पठाएर जरिवाना तिर्यो भन्ने हल्ला संसारभर फैलिरहेको बेला, नेपालमा चाँहि “दाङमा वन अधिकृतले कार्यालयबाटै गुगलम्याप हेरेर काठ तस्करी गर्दै गरेका तस्करहरुलाई पक्राउ गरे” भन्ने हल्ला फैलिएकोछ । हल्ला फैलिएको मात्रै त के भन्नु, नेपालका मुलधारका मिडियामा यस्तो नचाहिने र हुनै नसक्ने खबर’ले प्राथमिकता पाएकोछ ! कान्तिपुरमा ‘तस्करी रोक्न गुगल म्याप’ शीर्षकमा छापिएको समाचार यस्तो छ: दाङ, भाद्र १३ - जिल्ला वन कार्यालयले तस्करी रोक्न गुगल म्याप प्रयोगमा ल्याएको छ । यसको प्रयोग वन अधिकृत अरुण शर्मा पौडेलले शुक्रबार कार्यालयमै बसेर गरेका थिए । म्यापलाई सानो बनाएर हेर्दै जाँदा गोल्टाकुरी गाविसको कालितारामा काठ काटेको दृश्य देखियो । उनले तत्काल वन रक्षकको टोली पठाए । वनको टोली २ घन्टा हिँडेर जंगलमा पुगेपछि काठ काट्दै गरेका एक व्यक्ति आरा, बञ्चरो र पाँच क्युफिट काठसहित पक्राउ परे । सोमबार दिउँसो पनि गुगल म्याप हेर्दै गर्दा पुरन्धारा गाविसका जंगलमा काठ काटिएका दृश्य देखिए । अनि
इन्टरनेटमा फैलिएको खबरहरुका कारण अहिले गफ गर्नेको लागि गज्जबको 'टपिक' मिलेकोछ । सामसुङले जरिवाना स्वरुप १ अर्ब डलर, एप्पललाई तिर्नुपर्ने भएकोछ । यहाँसम्म त ठिकै थियो तर पछिल्लो खबर अनुसार त, सामसुङले ५ सेन्टका सिक्काहरुले भरिएको ट्रकहरु मार्फत एप्पललाई जरिवाना तिर्यो भन्ने खबरहरु फेसबुक र ट्विटरमा छ्याप्पछ्याप्ति फैलिएकाछन् । खबरमा लेखिएकोछ, "Samsung paid Apple its $1bn fine by sending more than 30 trucks to Apple's headquarters loaded with nickels [5-cent pieces]". एप्पललाई सामसुङले गज्जब तरिकाले बिगो वापतको रकम तिर्यो भन्ने हल्लाका कारण कोही सामसुङको आइडियालाई स्यावासी दिइरहेकाछन् त कोही एप्पललाई अब त भेटिस नि शैलीले धारे हात लगाइरहेकाछन् । खबर आफैँमा रमाइलो र रोचक छ । तर खबर जति रमाइलो छ, त्यति नै यथार्थको धरातलबाट टाढा रहेकोछ । सिधा रुपमा भन्दा, यो एउटा झुटो खबर हो । रमाइलो 'अनिअन' शैलीको मेक्सिकन साइट ' एल्डेफर्मा ' नामक साइटबाट फैलिएको आशंका गरिएको यो खबरले अनलाइनमा भने राम्रै तहल्का मच्चाइरहेकोछ । खबर झूटो नै भएपनि अधिकांशले यही खबरलाई सह
Listen to Bulbul Episode-157 शुभ समय, शुभ पल, शुभ क्षण,शुभ सन्ध्या, शुभ रात्री !!! रात्री बसाइ को यो अर्को नयाँ अंक मा केही रात्री गन्थनको साथमा सुमधुर गजलहरु लिएर, सदा झैँ आज पनि प्रस्तोता अच्युत घिमिरे उपस्थित हुनुभएको छ । बुलबुल एउटा इरानी चरा हो । रात्रीको समयमा गाउँदै हिंड्‍ने यो चरा गजलको प्रतीक मानिन्छ । इरानदेखि नेपाल सम्मको यात्रा गरेकी बुलबुल, नेपालका लागि नौलो हैन । यो सर्वव्यापी छ । गजलका रागहरु जहाँ जहाँ अलापिन्छन्, त्यहीं त्यहीं यसको उपस्थिति रहन्छ । प्रेम, विरह, उत्साह, उमंग अनि थुप्रै मनका संवेगहरु बुलबुलले समेट्‍छ । बुलबुल सुन्न थालेपछि हामी सबै एउटा समूहमा समेटिन्छौं र बुलबुल भित्र आफैंले आफ्‍नो नाम दिन्छौं - बुलबुललियन । हामी यहाँ एकाकार भएर लाग्छौं, गजलको भावनात्मक सहवासमा । " एउटा प्रेमको बिरुवा हामी रोप्छौं.....युग युग सम्म लगाएर यो प्रीतलाई अमर गर्छौँ।" Download Bulbul : Episode-157
“मलाई अदितिको नङ्ग टोक्ने बानि मन पर्दैन।” अदितिसँगको मेरो पहिले गुनासो यही थियो । आज म हजार कोशिस गर्दछु, तर अँह त्यो जस्तो निश्चल मन दुखाई गर्न सक्दिन । त्यस्तो मीठो उजुरी उठ्दैन । भोगाइका एउटा होला, पात्र एउटा होला, घडि एउटा होला तर यहाँ भाव सापेक्षिक हुदाँ रहेछन् । अभ्यस्थ भोगाइका भावना ब्यवसायिक भईदिँदा रहेछन । घटिमा मेरा लागि । उ बायोलोजी ग्रुपमा रहिनछे । मेरो अंग्रेजीको क्लास सँगै भएर मनमा निकै घिउ पोखिसकेको थिए । पहिलो मन पराइ, पहिलो माया डरलाग्दो हुन्छ । रन्कोमा कसो म फिजिक्स ग्रुपमा सरुवा भइन । हुन त नगएर पनि लछारपाटो केहि लागेन । ‘बायोलोजी’ पढ्ने सबै डाक्टर कहाँ भइदिदाँ रहेछन र । एक हेराइ मनग्गे थियो, अदिति मन परिन् । माया लागे जस्तो भयो । शुरुमा अंग्रेजी कक्षा मात्र थियो । बिस्तारै ल्याब रिपोर्ट, फिजिक्स ट्युसन, क्यान्टिनका खाजाले मेरो मायाका डोरा बाट्दै गए । झन हेर्यो झन माया लाग्ने । अल्लारे बैंश अनि बैंशको सपना, म निकै पुलकित थिए । टोलाएको हेराइ र ओल्सिएको बोलाइले मात्रै मायालुका मनमा माया प्रसारित हुने भए संसार अर्कै हुन्थ्यो होला । यहाँ व्यक्त नभएका माया कतिले नै प
Listen to Bulbul Episode-156 शुभ समय, शुभ पल, शुभ क्षण,शुभ सन्ध्या, शुभ रात्री !!! रात्री बसाइ को यो अर्को नयाँ अंक मा केही रात्री गन्थनको साथमा सुमधुर गजलहरु लिएर, सदा झैँ आज पनि प्रस्तोता अच्युत घिमिरे उपस्थित हुनुभएको छ । बुलबुल एउटा इरानी चरा हो । रात्रीको समयमा गाउँदै हिंड्‍ने यो चरा गजलको प्रतीक मानिन्छ । इरानदेखि नेपाल सम्मको यात्रा गरेकी बुलबुल, नेपालका लागि नौलो हैन । यो सर्वव्यापी छ । गजलका रागहरु जहाँ जहाँ अलापिन्छन्, त्यहीं त्यहीं यसको उपस्थिति रहन्छ । प्रेम, विरह, उत्साह, उमंग अनि थुप्रै मनका संवेगहरु बुलबुलले समेट्‍छ । बुलबुल सुन्न थालेपछि हामी सबै एउटा समूहमा समेटिन्छौं र बुलबुल भित्र आफैंले आफ्‍नो नाम दिन्छौं - बुलबुललियन । हामी यहाँ एकाकार भएर लाग्छौं, गजलको भावनात्मक सहवासमा । " एउटा प्रेमको बिरुवा हामी रोप्छौं.....युग युग सम्म लगाएर यो प्रीतलाई अमर गर्छौँ।" Download Bulbul : Episode-156
Listen to Bulbul Episode-155 शुभ समय, शुभ पल, शुभ क्षण,शुभ सन्ध्या, शुभ रात्री !!! रात्री बसाइ को यो अर्को नयाँ अंक मा केही रात्री गन्थनको साथमा सुमधुर गजलहरु लिएर, सदा झैँ आज पनि प्रस्तोता अच्युत घिमिरे उपस्थित हुनुभएको छ । बुलबुल एउटा इरानी चरा हो । रात्रीको समयमा गाउँदै हिंड्‍ने यो चरा गजलको प्रतीक मानिन्छ । इरानदेखि नेपाल सम्मको यात्रा गरेकी बुलबुल, नेपालका लागि नौलो हैन । यो सर्वव्यापी छ । गजलका रागहरु जहाँ जहाँ अलापिन्छन्, त्यहीं त्यहीं यसको उपस्थिति रहन्छ । प्रेम, विरह, उत्साह, उमंग अनि थुप्रै मनका संवेगहरु बुलबुलले समेट्‍छ । बुलबुल सुन्न थालेपछि हामी सबै एउटा समूहमा समेटिन्छौं र बुलबुल भित्र आफैंले आफ्‍नो नाम दिन्छौं - बुलबुललियन । हामी यहाँ एकाकार भएर लाग्छौं, गजलको भावनात्मक सहवासमा । " एउटा प्रेमको बिरुवा हामी रोप्छौं.....युग युग सम्म लगाएर यो प्रीतलाई अमर गर्छौँ।" Download Bulbul : Episode-155
बाघचाल हामी नेपालीको लोकप्रिय दिमाग ख्याउने खेल ! २० वटा बाख्रा अनि ४ वटा बाघका साथ खेलिने ‘बाघचाल’ केही महिना देखि अनलाइनमा खेल्न थालिएकोछ । सेमिकलन डेभ्लपर्स’ले निर्माण गरेको बाघचालमा यो हप्ता “बाघचाल” टुर्नामेन्ट पनि सञ्चालन गरिएकोछ । अनलाइनबाघचालमा दुईजनाको खेल अरु’ले पनि हेर्न पाउँछन्, खेलाडिहरुले आपसमा कुरा गर्न पनि पाउँछन्, अरु कोही खेलाडी छैनन् र आफू एक्लै भइएकोछ भने कम्प्युटर सँग पनि खेल्न मिल्छ । अनलाइन बाघचालको गृहपृष्ठ (Home Page) मा अनलाइनमा चलिरहेको खेलहरुको विवरण देख्न सकिन्छ, त्यहाँबाट आफूले नयाँ खेल सुरु (create) गर्न सकिन्छ, या अरुले सुरु गर्न लागेको खेलमा प्रतिस्पर्धा पनि गर्न सकिन्छ, वा सकिएको खेलको ‘रिप्ले’ पनि हेरेर बस्न मिल्छ । त्यसबाहेक अनलाइन बाघचालको पब्लिक च्याटमा गएर बात मारेर बस्न पनि सकिन्छ । बाघचाल (Bagh Chal) मा बाघ र बाख्रा जनाउन बाघ र बाख्राको टाउका’को फोटो राखिएकोछ, जसबाट खेल्नेलाई एउटा रमाइलो अनुभव हुन्छ, खेलको दायाँ साइडमा कसको पालो हो, खेल सुरु भएको कति टाइम भयो, कति वटा बाख्रा बाँकी छन् भन्ने जानकारी देख्न सकिन्छ । खेलको पेज छोडेर अन्य पेजमा
युट्युबमा भिडियो कत्ति’को हेर्नुहुन्छ? गुगल’ले आफ्नो क्यास सर्भर नेपालमै राखेपछि यहाँबाट युट्युबमा भिडियो हेर्नेहरु’को सङ्ख्या बढिरहेकोछ । धेरै भिडियो हेर्ने बानी गर्नु भएको भए, कहिलेकाँही कुनै कुनै भिडियो जम्मा ३ सय पटक हेरिएको (Views) देखाइरहँदा पनि लाइक भने हजारौँ पटक गरिएको देख्नुभएको होला । सायद यसकै बारेमा जोक नि बनाउनु भएको’होला । जम्मा ३ सय पटक हेरिएको कुनै भिडियोले हजारौँ हजार लाइक र डिसलाइक कसरी पाउँछ भन्ने कौतुहलता नि धेरै पटक लागेको होला । प्राय: युट्युब भिडियोहरुको भ्युज काउन्ट (view count) ३०१ मा गएर केही समयको लागि रोकिन्छ र केही समयपछि फेरि गणना गर्न सुरुहुन्छ । रिक्याप्चाको कथा थाहा पाउँदा जति अचम्ममा परिएको थियो, युट्युबको यो कथा थाहा पाउँदा पनि त्यति नै अचम्ममा परिएकोछ । भ्युज भन्दा धेरै लाइक हुनु वा भिडियो हेरिएको सङ्ख्या लामो समयसम्म ३०१ नै देखिरहनु युट्युब प्रयोगकर्तालाई अचम्भित तुल्याउने तथ्यहरु हुन् । कुनै कुनै भिडियोहरु अपलोड गर्ने बित्तिकै धेरैले हेर्ने गर्छन् या भनौँ भिडियो अपलोड गरेको केही क्षणमै ‘पपुलर’ हुनसक्छ, भ्युकाउन्टरले हेरिएको सङ्ख्यालाई दर्
Listen to Bulbul Episode-154 शुभ समय, शुभ पल, शुभ क्षण,शुभ सन्ध्या, शुभ रात्री !!! रात्री बसाइ को यो अर्को नयाँ अंक मा केही रात्री गन्थनको साथमा सुमधुर गजलहरु लिएर, सदा झैँ आज पनि प्रस्तोता अच्युत घिमिरे उपस्थित हुनुभएको छ । बुलबुल एउटा इरानी चरा हो । रात्रीको समयमा गाउँदै हिंड्‍ने यो चरा गजलको प्रतीक मानिन्छ । इरानदेखि नेपाल सम्मको यात्रा गरेकी बुलबुल, नेपालका लागि नौलो हैन । यो सर्वव्यापी छ । गजलका रागहरु जहाँ जहाँ अलापिन्छन्, त्यहीं त्यहीं यसको उपस्थिति रहन्छ । प्रेम, विरह, उत्साह, उमंग अनि थुप्रै मनका संवेगहरु बुलबुलले समेट्‍छ । बुलबुल सुन्न थालेपछि हामी सबै एउटा समूहमा समेटिन्छौं र बुलबुल भित्र आफैंले आफ्‍नो नाम दिन्छौं - बुलबुललियन । हामी यहाँ एकाकार भएर लाग्छौं, गजलको भावनात्मक सहवासमा । " एउटा प्रेमको बिरुवा हामी रोप्छौं.....युग युग सम्म लगाएर यो प्रीतलाई अमर गर्छौँ।" Download Bulbul : Episode-154
हप्तादिन अघि टेलिभिजन पत्रकार दिल भुषण पाठकले लिएको प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अन्तरवार्ता सर्वाधिक चर्चित रह्यो । आफूले जनयुद्ध थाल्दा तेर्स्याइएका र आफूले भाषणमा गरिएका कुराहरु नै अन्तरवार्ताको रुपमा भट्टराईलाई प्रश्न सोधिएकोथियो, जसको चित्तबुझ्दो जवाफ उनले दिन सकेनन् । गतहप्ताको अन्तरवार्ता हिन्दी चलचित्र ‘नायक’ को शैलीमा भन्दै धेरैले तारिफ गरेका थिए, तर आज नभन्दै त्यही दुई भिडियोलाई रिमिक्स गरिएको एउटा रमाईलो भिडियो युट्युबमा भेटियो । चलचित्र ‘नायक’ र बाबुराम भट्टराईको अन्तरवार्तालाई रिमिक्स गरेर बनाइएको भिडियोमा अनिल कपुरले अमरिश पुरी र दिलभुषणले बाबुराम भट्टराईलाई सोधेको प्रश्नको प्रकृति एउटै छ, अनि उनीहरुले दिएको जवाफ पनि उस्तै छ । ‘रियल लाइफ’बाट ‘रिल लाइफ’ देखाइएको त थाहा थियो तर यहाँ त ‘रिल लाइफ’को कुरा ‘रियल लाइफ’मै देखियो । बाँकी कुरा तलको भिडियोमा हेर्नुहोला: Anil Kapoor takes interview of PM Babu Ram Bhattarai (remix)
Listen to Bulbul Episode-153 शुभ समय, शुभ पल, शुभ क्षण,शुभ सन्ध्या, शुभ रात्री !!! रात्री बसाइ को यो अर्को नयाँ अंक मा केही रात्री गन्थनको साथमा सुमधुर गजलहरु लिएर, सदा झैँ आज पनि प्रस्तोता अच्युत घिमिरे उपस्थित हुनुभएको छ । बुलबुल एउटा इरानी चरा हो । रात्रीको समयमा गाउँदै हिंड्‍ने यो चरा गजलको प्रतीक मानिन्छ । इरानदेखि नेपाल सम्मको यात्रा गरेकी बुलबुल, नेपालका लागि नौलो हैन । यो सर्वव्यापी छ । गजलका रागहरु जहाँ जहाँ अलापिन्छन्, त्यहीं त्यहीं यसको उपस्थिति रहन्छ । प्रेम, विरह, उत्साह, उमंग अनि थुप्रै मनका संवेगहरु बुलबुलले समेट्‍छ । बुलबुल सुन्न थालेपछि हामी सबै एउटा समूहमा समेटिन्छौं र बुलबुल भित्र आफैंले आफ्‍नो नाम दिन्छौं - बुलबुललियन । हामी यहाँ एकाकार भएर लाग्छौं, गजलको भावनात्मक सहवासमा । " एउटा प्रेमको बिरुवा हामी रोप्छौं.....युग युग सम्म लगाएर यो प्रीतलाई अमर गर्छौँ।" Download Bulbul : Episode-153